Zakariye Ma Abaalmarin buu mudnaa Mise Ciqaab…!? – Hornafrik Media Network
Zakariye Shabab wuxuu si rasmi ah ugu biiray 2003-dii, balse, waraysiga wuxuu ku sheegay inuu ku biiray 2006-dii. Halkaa waa meesha aan ku lahaa waraysi ma ahayn, ee sheeko ayuu ahaa. Lama hubo inuu markaa tababar ciidan qaatay, balse, dad badan waxay qabaan inuu xitaa maray layliskaa.
Ka dib Zakariye, wuxuu waxbarasho u aaday dalka Pakistan, oo uu Jaamacad ka dhiganayey, uuna xiriir fiican kula yeeshay Alqaacidda. Markii uu dhammaystay waxbarashada, wuxuu u soo laabtay Soomaaliya, oo halkii uu shaqadiisa ka sii watay.
Markii ciidanka Xabashidu dalka qabsadeen, ee wadaaddadu ku jireen firxadka, ayuu Zakariye damcay inuu ku laabto Pakistan, balse, wuxuu ka war helay in lagu dabajoogo, oo ay raadinayaan Sirdoonka Pakistan, sidaana ugu qasbanaaday inuu dalka jooga, ooba xil sare iyo qabtay jago culus (MADAXA SIRDOONKA ALSHABAAB) Alla wuxuu dil iyo qarax badan wax ka ogaa! MAGAN.
Qaraxii Hotel Shaamow 03/12/2009kii, ee ay ku qurbexeen aqoonyahanno iyo siyaasiyiin u badan isla wadaaddadii MAXKAMADAHA, ayaa waxaa la isla dhexmarayey in Col. Cabdisamad oo abti u ah Zakariye, gabar uu dhalay aysan ka soo qaybgalin xafladdaa, maadaama uu Zakariye ku wargliyey inaysan halkaa tagin maalintaa. Horaa loo yiri; “Fiqi tolkii kama Janno tago!”.
Isla sanadkii 2009-kii, mar la isku dayey in wada hadal lala furo Shabaab, wafdigii ka socday Culimada Muslinka (gaar ahaan Ikhwaanka Qadar), waxa la sheegay in wafdiga Shabaab wada hadalka uu u matalyey isla Zakariye, dadkiina uu u kala saaray dhawr qaybood, oo ay ugu muhimsanayd:
– In wafdigii baarlamanka Kuweyt ka socday lagu yiri idinka siyaasiyiin baad tihiin ee dhan u baxa.
– Halka Umal iyo raggii kale ee la socday (Soomaalidii) lagu yiri: idinka waxaa la idin siinayaa siminaar ku saabsan diinta Islaamka, maadaama aad ka timaadeen dhul gaalo (Kenya).
Haddaba, ninka sidaa ahaa, walina ah, sidee inta uu isu soo dhiibay, loogu oggolaaday inuu siduu doono u hadlo? Sow ma ahayn in indhaha dadka laga qariyo, maadaama uu CABSI, DHIIG iyo ka samaysan yahay GEERI? Xasuuso, inta qof, ee Shabaab dileen, ma is leedahay Zakariye wax kama ogayn? Hadduu ka ogaa, haddaba, miyuusan DHIMASHO ka samaysnayn? Nabadda uu maanta baahinayo, muxuusan u qaadan maalintaa ay ka dhaweed? GABLAN!
Halka uu noo sharaxayo xiriirka Alqaacidda iyo Shabaab, saw kama muhim sanayn inuu nooga sheekeeyo, dadka ay dileen, waxa ay ku dileen, qaabka ay u dili jireen, sida ay u xulan jireen iwm? Isagu meeqa ayuu wax ka ogaa ama amarkeeda baxshay? Anaga hadda yuusan isaga keen dhigin MALAGE, shalay wuxuu ahaa, ha nooga sheekeeyo fadlan.
Waxaa la yaab leh Zakariye marka uu yiri, shisheeyaha ka garab dagaallama shabaab ee dalka jooga, kama badnaan karaan laba boqol! Yuu riwaayaddaa u dhigayaa? Midda kale ku lahaa; “waa filaa” inuu yareeyay ka sokow, wuxuuba malo sii galiyey tiro ahaanba, oo gabadha waraysiga ka qaadday, aysanba ku baraarugin. Mise waa ku baraarugtee, waxaa lagu yiri weydii weydiimo xaddidan?.
Waxaan la yaabaa, waxaa xabsiga loogu taxaabay wariyeyaal ka tirsan Idaacadda Shabeelle, albaabbadana la isugu dhuftay, oo lagu haysto inay sii daayeen codka Cali Dheere, afhayeenka Alshabaab, weerarkii Jaamacadda Gaarisa ka dib. Ogoow, Cali hadduu hadda isa soo dhiibo ama la qabto, wiilashan oo wali xiran, waxaa loola dhaqmayaa, sida hoggaamiye ama boqor oo kale!
Is qabadsii, Sirdoonkii Shabaab Zakariye, ayaan ka dhigay Madaxa Sirdoonka NISA, Haddana waxaa laga yaabaa inaanba ka dhigo Taliyaha Guud ee NISA iyo Waxaan la dagaalamayaa Alshabaab, Maxaa bari lagu ciqaabayaa kuwa gaystay Weeraradii Soobe iyo Naasahablood haddii ay sida Zakariye isi soo dhiibaan,?
Waxaa Qoray bashiir M Xersi.
Dowladda Somalia oo badashay Siyaasadeedii ku aadanayn Galmudug, kuna wargalisay Xubnihii ay ka hor keeneen Xaaf inay hadda la shaqeeyaan